हरिबोधनी एकादशीमा सरोबरको देउशी तयारी
मकवानपुर । आर्थिक विपन्नता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्नका लागि रेडियो सरोबर ९२.५ मेगाहर्ज हेटौंडाले ठूलो एकादशीका लागि देउशीभैलोको तयारी गरेको छ । रेडियोले पत्रकार समेलन गर्दै देउशीभैलो गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । रेडियोले फेसबुक समूह ‘दारी ग्याङ’ मा आबद्ध युवाहरुको सहयोगमा हरिबोधनी एकादशीका दिन हेटौडाका कम्तिमा १० स्थानमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको रेडियोका स्टेशन म्यानेजर राजु लामिछानेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा लोक सस्कृति झल्किने खालका परम्परागत देउसी, लोक नृत्य, खैजेडी भजन, श्लोक लगायत प्रस्तुती प्रस्तुत गरिने रेडियोका स्टेशन संयोजक रविन्द्र गौतमले बताए । कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकम ‘सरोवर छात्रवृति कोष’मा जम्मा गरिने र आवश्यता बमोजिम विपन्न बालबालिकाको शिक्षाका लागि खर्च गर्ने रेडियोको तयारी छ ।
यसरी सम्हालिन् प्रदेश प्रमुख कोइरालाले जिम्मेवारी
नौटङ्की प्रदर्शन विरुद्ध लाग्छु : नवराज सिलवाल
द्रुतमार्गको डीपीआर सेना आफैंले बनाउने
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीको विकास
आज रुपचन्द्र विष्टको जन्म जयन्ती, यस्तो छ उनको अनौठो जीवन कथा !
डा. केसीले बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई लगाए ११ वटा यस्तो आरोप
मउवासंघ साधारणसभा : राजकुमार न्यौपानेले स्वागत भाषणमा पोखे दुःखेसो !
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५१ औं वार्षिक साधारणसभा जारी छ । सभाको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका...
को हुन् ति बालक, जसलाई भेट्न माग्नेबुढा उनको घरमै पुगे !
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडास्थित हेटौंडा रिगल रिर्सोटमा शुक्रबार बेलुका देशका चर्चित कलाकारको जमघटमा...
नेपाली लोकदोहोरीमा गीतादेवी चर्चित नाम हो । ‘भन्नु नभाको’ बोलको गीतले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो । बिचमा...
मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ८, इपापञ्चकन्या चन्द्रामकी एकल महिला पञ्चमाया भोलनको घर...
यही पुष १५ गतेबाट हुन लागिरहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको माहौलले अहिलेको चिसो मौसमलाई तताएको छ...
व्यवसायीको हितका लागि मैले तित्नुपर्छ : कृष्ण कटुवाल
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आगामी नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका कृष्ण कटुवालले आफूले चुनाव जितेमा...
हेटौंडा बनेन प्रदेश राजधानी, भक्तपुर सिफारिस
मकवानपुर । हेटौंडा प्रदेश राजधानी बन्ने मकवानपुरका नागरिकको सपना पूरा नहुने भएको छ । सरकारले नेपालको सातैवटा...
रक्सीमा नाँचेर उठाइएको पैसाबाट राहत कोष ?
मकवानपुर । पछिल्लो समय मकवानपुरको हेटौंडालाई राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि उपयुक्त थलो...
कलाँटुबासीको उदाहरणीय काम
मकवानपुर । थाहा नगरपालिका वडा नं १० को चित्लाङ कलाँटु स्थित स्थानिय ब्यक्तिहरुको सहकार्यमा सडक बाटो खनेका छन् ।...
कृष्ण कटुवालले जिते चुनाव, राउत १ सय ८८ मतले पराजित
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आगामी नेतृत्व कृष्ण कटुवालको काँधमा आएको छ । संघको ५१ औं साधारणसभाबाट...
मकवानपुर । तीन नम्बर प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखका रुपमा उनले...
काठमाडौं । नेकपा एमालेले १ नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो भागमा परेको ४ सिटका लागि ४० जना...
काठमाडौं । नेकपा एमाले ललितपुरका सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज शिलवालले पछिल्लो समय नेपाल सरकार तथा प्रहरी...
काठमाडौं । थाइल्याण्डमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश प्रमुख र...
सरकारलाई माग्नेबुढाको प्रश्नः अब म काठमाडौँ बसौँ कि हटौँडा जाउँ?
हस्यकलाकार केदारप्रसाद घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ले आफू काठमाडौँ बस्ने कि हेटौँडा जाने भन्ने बारेमा दोधारमा परेको...
मकवानपुर । पुर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा प्रथम बकैया साँस्कृतिक महोत्सव २०७४ हुने भएको छ । आज...
नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधीबाट चित्लाङमा च्याउ खेती
मकवानपुर । मकवानपुरको चित्लाङ्मा नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सुरु गरिएको गोब्रे च्याउ खेती...
काठमाडौं । नेपाली सेना आफैंले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने आज...
यस्ता छन् हस्तमैथुनका फाइदा
मानिसलाई यौनका विषयमा धेरै चासो रहने गर्दछ । आफ्नो यौन चाहाना पूरा गर्नका लागि मानिसले अनेक उपाय सोच्ने गरेको छ ।...
कविता : मुर्ति मान्छे
आर.आर. चौलागाईं मान्छे कहिलेकाहीँ त मूर्ति पनि हुँदो रहेछ । घरमा आगो लाग्छ, हेरिबस्दो रहेछ कागले मुखमा...